Dagaalkii Foolka-Foolka markii lagu kala Calaf qaaday Maamulkii Canfarta oo bilaabay Maati Afduub. – Xeernews24
Dagaalkii Foolka-Foolka markii lagu kala Calaf qaaday Maamulkii Canfarta oo bilaabay Maati Afduub.
12. Oktober 2019 /in WARAR/NEWS /von admin
Maleeshiyaad Canfar ayaa ku afduubay dumar xoolo-dhaqato Soomaaliyeed ah meel aan aad uga fogayn Masalu oo ka tirsan Cadayti. Tirada dumarka ayaa lagu sheegay dhowr iyo toban. Warkii ugu danbeeyay ee caawa fiidkii aan Cadayti ka helnay wuxu sheegayaa in la sii daayay dhammaan dumarkii afduubka loo haystay iyagoo nabad qaba. Maamulka Canfarta iyo maleeshiyaad abaabulan oo ka amar qaata oo ku fashilmay dagaalkii tooska ahaa ayaa bilaabay afduub ay la beegsanayaan dadka birimagaydada ah. Saddex maalmood kahor ayay ahayd markii ay booliska Canfartu weerareen gaadhi ambalaas ah oo siday haween dhakhtar u socday. gabi ahaanna waxaa la xaqiijiyay inay nabad qabaan Saddexdii nin ee ambulance ka lagu weeraray ee kala firxaday waxayna gaadheen Guryohoogii
Dhanka kale maanta ilaa shalay is-riix iyo dagaallo kooban oo kasii socday dhanka xuduuda aagga Cadayti iyaa si wayn looga durkiyay liyuuga canfartu goobihii ay horay usii fadhiyeen , dhanka Shacabka Soomaaliyeed ee isdifaaci dhimashadu waa Hal iyo Saddex dhaawac ah. Guud ahaanna Dhul badan baa laga xoreeyay liyuuga Deegaanka canfarta. Inta dhimanna waa la Rajaynayaa in laga saaro
Ciidanka milatariga Itoobiya ayaa Liyuu Booliska Canfarta kala wareegay gaadhigii ambalaaska ahaa ee ay dhawaan xoogga ku qabsadeen. Ilo xogogaal ah ayaa noo sheegay inuu gaadhigu yaallo xero ciidanka milatarigu ku leeyihiin magaalada Gawaani.
Ra’iisalwasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa maanta lagu dhawaaqay inuu ku guulaystay billadda caalamiga ah ee nabadda ee loo yaqaano Nobel Peace Price. Abiy ayaa abaalmarintan oo uu bixiyo guddi fadhigiisu yahay dalka Norway ku helay doorkii uu ku lahaa heshiiskii nabdeed ee kal-hore dhex maray Ethiopia iyo Eritrea, iyo waliba kaalinta uu ku lahaa isku-soo-dhawaynta dhinacyada siyaasadda Sudan isku hayay. Inkastoo ay Itoobiya wali la daalaa-dhacayso qulqulatooyin gudaha ah, haddana Abiy ayaa abaalmarintan ku mutaystay doorkiisa hoggaamineed ee siyaasadda dibadda iyo saamaynta uu ku yeeshay arrimaha geeska iyo bariga Afrika.
Axmaarada ku nool Addis Ababa ayaa abaabulaysa mudaharaad xooggan oo ay Axadda soo socota qorshaynayaan. Waxay aad uga cadhaysanyihiin hadallo ay madaxda Oromadu ka jeediyeen xuskii Irreecha ee dhawaan Addis Ababa lagu qabtay. Labada dhinac ayaa maalmahan eedayn iyo hadallo kulul isku marinayay warbaahinta.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/01/et-af.gif 217 451 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-10-12 01:14:082019-10-12 01:14:08Dagaalkii Foolka-Foolka markii lagu kala Calaf qaaday Maamulkii Canfarta oo bilaabay Maati Afduub.
Aas-Qaran oo maanta lagu aasay Marxuun Xidhibaan Axmed Casood oo Hargeysa ku Geeriyootay.
Jabhaddi ONLF oo ku biirtay isbahaysi cusub oo lagaga dhawaaqay Adis Ababa.
Shir dhaqmeedkii Beesha Ciise oo lagu gabagabeeyey Duleedka magaalada Af-Jano
Waa Kuma Gen Guulwadaha Ay Siyaasiyiinta Hargeysa Si Fiinta Uga Qaylyeen Hadlkiisa?
Raysal Wasaare Dr, Abiy Ahmed Oo Ku Guulaystau Abaal Marinta Nabadda Ee Nob... Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Muxuu Ku Muteystay Abaalmarinta Nabadda?